Enin-taona aty aoriana… : hiverina ao Antsahamanitra ry AmbondronA | NewsMada
Enin-taona aty aoriana… : hiverina ao Antsahamanitra ry AmbondronA
Nanamarika ny tantaran’ny fisehoana an-tsehatra ny zava-bitan’ny tarika AmbondronA tamin’ny nahafenoany irery ny Coliseum Antsonjombe, indroa nisesy. Na izany aza, tsy adinon’izy ireo ny miverina amin’ny niandohana.
Hanokatra ny « taom-pilalaovana », amin’ny alalan’ny fampisehoana indroa miantoana, ny tarika AmbondronA. Na maro aza ny manantena ny hanatontosana izany eny amin’ny Coliseum Antsonjombe, nambaran’izy ireo fa hiverina amin’ny niandohana aloha ny hetsika amin’ity indray mitoraka ity.
Araka izany, hotanterahina etsy Antsahamanitra ireo fampisehoana roa ireo : ny asabotsy 24 marsa sy ny ampitson’io, 25 marsa, samy amin’ny 3 ora tolakandro. Raha tsiahivina tokoa, mirakitra ny lalam-pahombiazana nodiavin’ny tarika ity toerana ity. Nanomboka ny taona 2013, teny amin’ny lapan’ny Kolontsaina eny Mahamasina hatrany no nifamotoana tamin’ny mpankafy izy ireo. Nitohy teny Antsonjombe izany, ny 2014.
« Hiverenana ny etsy Antsahamanitra, satria maro ireo mpankafy aty aoriana no tsy mahafantatra sy tsy mbola niaina ny ambiansa ao », hoy i Beranto. Nohamafisiny fa mifanakaiky kokoa ny tarika sy ny mpankafy ao amin’ity kianja mahazatra ny maro ity. Manolotra seho roa, izay samy haharitra ora telo eo ho eo, ry AmbondronA.
Azo lazaina ho mifameno izy ireo, satria, hatramin’izay, misy hatrany ireo hira tsy tafiditra ao amin’ny fandaharana noho ny fotoana. Amin’ity kosa, hahazo tombony manokana ireo hijery ny seho roa, araka ny fampanantenan’ny tarika. Ankoatra ireo hira nahafantarana azy ireo tao anatin’izay 17 taona izay, hampahafantatra sanganasa vaovao ihany koa izy ireo. Anisan’izany ny « Tiako hitoetra » sy ny « Maraina vao », efa nivoaka rakitsary any amin’ny « youtube » any. Santionany amin’ireo hira ao anatin’ny rakikira fahafiton’ny tarika, heverina hivoaka amin’ity taona ity, ihany koa ireo. Ankoatra ny fitetezam-paritra eto an-tanindrazana, vinavinan-dry AmbondronA koa ny hanatontosa hetsika goavana, any ivelany, amin’ny faramparan’ny taona, araka ny voalazan’i Beranto hatrany.